မြန်မာနိုင်ငံမှ ငါးနှင့် ပင်လယ်စာများ ဘာကြောင့် ဝယ်သင့်လဲ။ Why buy Fish & Seafood from Myanmar?
(ရေထွက်) အစားအစာထုတ်လုပ်မှု(၂၁)ခုမှာ အီးယူအသိအမှတ်ပြု (HACCP, ISO 22000, BRC) စသော အစားအစာအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးနှင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရေး ထောက်ခံအတည်ပြုလက်မှတ်များ(EU approved hygiene and food safety management certifications) ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရေထွက်ပစ္စည်းကဏ္ဍ ပုံမှန်စီးပွားရေးအဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းနေသောကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းသည် ကာလရှည်(ရေရှည်) အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အလွန်တက်ကြွသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစားအသောက်ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များပိုမို တိုးတက်လာစေရန်အတွက် အကြံဉာဏ်များနှင့် စွမ်းရည်မြှင့် သင်တန်းများကို ကျယ်ပြန့်စွာ စီစဉ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာ့ပင်လယ် ပုဇွန်ကျားသည် ၄င်း၏ ကြီးမားသော အရွယ်အစားနှင့် အလွန် ကောင်းမွန်သော အရသာတို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့တန်ကြေးအမြင့်ဆုံးသော ပုဇွန်များတွင် ပါဝင်သည်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ ဖမ်းယူရရှိသော သဘာဝအတိုင်းပန်းရောင်ပုဇွန်မှာ ထူးခြားသော အရောင်နှင့် အရသာတို့ကြောင့် ဥရောပစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများက အလွန်တန်ဖိုးထား နှစ်သက်ကြသည်။
ရိုးရာပုဇွန်မွေးနည်းဖြစ်သော ဖမ်းဆီး၍ ထိန်းသိမ်း မွေးမြူသော စနစ်တွင် ပြုပြင်ဖန်တီး ထားသော အစားအစာများနှင့် ဓာတုဆေးဝါးများ သုံးစွဲခြင်းမရှိသောကြောင့် သဘာဝပုဇွန်ငယ်များ သာ ရရှိသည်။ ဤနည်းဖြင့် မွေးမြူရာတွင် အခြားပုဇွန်ထုတ်လုပ်သော နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ထွက်နှုန်းနည်းပါးသော်လည်း ထူးခြားကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့်ပြည့်စုံသည်။
Product Profile on Myanmar Frozen Shrimps – Download now.
မြန်မာ့ငါးနှင့် ပင်လယ်စာကဏ္ဍ (Myanmar’s Fish and Seafood Sector)
နိုင်ငံလူဦးရေ (၅၃)သန်းနှင့် (၂၀၀၀) ကီလိုမီတာကျော်ရှည်သော ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ငါးနှင့်ပင်လယ်ထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော နိုင်ငံအဖြစ် အောင်မြင်နိုင်ရန် အလားအလာအလွန်ကောင်းပါသည်။ (၂၀၁၆/၂၀၁၇)တွင် မြန်မာ နိုင်ငံမှ မွေးမြူရေးငါးနှင့် ပင်လယ်မှ ဖမ်းယူရရှိသော ငါးစုစုပေါင်းမှ (၅.၇) သန်းနီးပါးထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ ထက်ဝက်ကျော်ခန့်မှာ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှ ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများနှင့်ငါးမွေး မြူရေးလုပ်ငန်းများမှ ရရှိသော ငါးစုစုပေါင်း၏ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုသာ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်း ချခဲ့ပါသည်။ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းသည် အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိရန် အခက်အခဲများရှိနေပြီး ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်လည်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းနေသေး သော်လည်း ထပ်မံတိုးတက်ရန် အခွင့်အလမ်းများရှိနေပါသည်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ ပိုမိုများပြား လာခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာစျေးကွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ ပိုမိုများပြားလာခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ သည် ဒေသတွင်း ၀ါးနှင့် ပင်လယ်စာထုတ်လုပ်သော အဓိကဌာနတစ်ခုဖြစ်လာရန် အလားအလာ များစွာရှိနေပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ငါးမွေးမြူရေးကန်များသည် ဧက(၄၀၀၀၀) ထပ်မံ များပြားလာခဲ့ပြီး ငါးထွက်ရှိမှုပမာဏလည်း တန်ချိန် (၄၀၀၀၀၀) ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။
No. Year Area of Production of
Aquaculture Ponds Aquaculture Ponds
(Acre) (Thousand Metric Ton)
1. 2007-2008 441098 687.67
2. 2008-2009 440585 775.25
3. 2009-2010 442702 858.76
4. 2010-2011 443695 830.48
5. 2011-2012 448468 899.05
6. 2012-2013 449692 929.38
7. 2013-2014 450324 964.12
8. 2014-2015 469153 999.63
9. 2015-2016 478002 1014.42
10. 2016-2017 487525 1048.69
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းအနေအထား (Export Structures)
၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၇ အတွက် ပို့ကုန်တန်ဖိုးမှာ ယူရို(၃၁၈)သန်းနီးပါးမှ (၆၆၂)သန်းနီးပါး ရှိပါသည်။ ယင်းပမာဏသည် ဗီယက်နမ်(အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆ယ.၉ ဘီလျံ)နှင့် ထိုင်း (၅.၈ ဘီလျံ) တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက များစွာလျော့နည်း နေပါသေးသည်။မြန်မာ့ငါးလုပ်ငန်းသည် ဒေသတွင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း၌ အားနည်းနေပါသေးသည်။ သို့ရာတွင် ယခုအခါ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ရုတ်သိမ်းပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် အခြေအနေကောင်းများ ဖြစ်ထွန်းလာ၍ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများ အချိန်တိုအတွင်း တိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။ အကယ်၍ တန်ဖိုးမြင့်မားသော မျိုးစိတ်များကို မွေးမြူထုတ်လုပ်နိုင်ပါက ရေရှည်တွင် အလားအလာကောင်းများပို၍ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
Myanmar’s Fish Exports over 2013-17 in US$’000 by product category
Key Products Exported
No. Species (Common Name) MT( Ordinary) US$( Million) Wild catch
1. Rohu (Indian Carp) 64016.755 60.335 50% (sweet water)
2. Live Mud Crab 16471.428 48.907 100%
3. Live Eel 7496.766 26.103 100%
4. Pink Shrimp 10322.550 22.951 100%
5. Tiger prawn 4203.400 20.252 50%
6. Hilsa 6106.970 15.507 100%
7. Ribben Fish 9265.445 14.972 50%
8. Soft Shell Crab 2835.486 14.708 100%
9. Fish Meal 21158.450 12.804
10. White Shrimp 2553.990 11.508 100%
မြန်မာ့ပင်လယ်ထွက်ကုန်များကို ဥရောပသို့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ တင်ပို့နိုင်ရေးသည် မြန်မာ့ငါးထုတ်ကုန်တင်ပို့သူများ အဖွဲ့အစည်း၏ အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဥရောပသမဂ္ဂက ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ချမှတ်ခဲ့သော ကန့်သတ်မှုများအရ မြန်မာနိုင်ငံမှ အီးယူသို့ အေးခဲထားသော သဘာဝငါးနှင့် ပုဇွန် များ(wild-caught, frozen fishery products)သာ တင်ပို့ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ မွေးမြူရေးငါးများပါ တင်ပို့ခွင့်ရရှိရန် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နေပါသည်။
မြန်မာငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံ အဆင့် ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်ပမာဏ စောင့်ကြည့်ရေးအစီအစဉ်(a National Residue Monitoring Plan)ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှု အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အီးယူပါလီမန်(E.U. Parliament)မှ မြန်မာ့ရေလုပ်ငန်း ထွက်ကုန်များ တင်သွင်းခွင့်ပြုရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကြာမီချမှတ်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
Number of Company - 556 Companies
Number of Company Exporting – 282 Companies (2016-2017)
Shwe Yamone MFG Co.,Ltd,
Asia Winner Co.,Ltd,
Grand Wynn Co.,Ltd,
Pyae Phyo Tun Co.,Ltd,
Ayeyarwady Fisheries Co.,Ltd
Thantwe Marine Co.,Ltd,
Myint Myat Hein Co.,Ltd,
အီးယူခွင့်ပြုချက်ရ (ရေထွက်ပစ္စည်း) ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများ EU approved processing establishments
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုအခါ အီးယူအသိအမှတ်ပြု ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံပေါင်း (၂၁)ခုရှိပါသည်။ ၄င်းတို့စက်ရုံများအနက် စက်ရုံ(၁၃)ခုမှာ ရန်ကုန်တွင်ရှိပြီး (၁)ခုမှာ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင်ရှိပါသည်။ စက်ရုံအားလုံးမှာ (HACCP Certificate) ၊ စက်ရုံအများအပြားမှာ (USFA Certificate)နှင့် စက်ရုံအချို့မှာ (ISO 22000 Certificate) တရားဝင် ထောက်ခံချက် အသီးသီးရရှိထားကြပြီး မကြာသေးမီကာလက စက်ရုံ(၂)ခုသည် (BRC Certificate) တရားဝင်ထောက်ခံချက် ရရှိထားပါသည်။
အစိုးရနှင့် အထောက်အပံ့ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများ (Government and Support Organizations)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ထောက်ပံ့မှုပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီမံကိန်းများစွာရှိပါသည်။ ဆက်စပ်နေသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီမံကိန်းများမှာ
- ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(Department of Fisheries- DOF)
ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ငါဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
- DOF သည် စျေးကွက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် ငါးလုပ်ငန်းထွက်ကုန်များ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်
ညီညွတ်ခြင်းရှိ/မရှိကို စစ်ဆေးရသော အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
- မြန်မာငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်(The Myanmar Fisheries Federation-MFF)ကို မြန်မာ့ပုဇွန် အသင်းအဖွဲ့အပါအဝင် အသင်းအဖွဲ့ ပေါင်း (၁၀)ခုကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
- မြန်မာ့ရေထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအစီအစဉ်(Myanmar Sustainable Aquaculture Program-MYSAP)ကို အသေးစား လုပ်ငန်းရှင်များကို ပံ့ပိုးရန်နှင့် ရေထွက်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်သောထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ချောမွေ့စေရန် ရည်ရွယ်ချမှတ်ထားသည်။ ဤစီမံကိန်းကို (၂၀၁၇) တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းကာလမှ (၂၀၂၁) အထိဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(Trade Development Program TDP)
ပင်လယ်စာထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ အထူးသဖြင့် အစားအစာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အကူအညီနှင့် လမ်းညွှန်မှုများ ပေးနိုင်ရန်(DOF) ၏ အစားအစာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အားဖြည့် ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် (TDP) စီမံကိန်းကို ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပင်လယ်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးအစီအစဉ်(Seafood Export Coaching Program)
မြန်မာငါးထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပြည်ပတင်ပို့သူများအသင်းအဖွဲ့ (Myanmar Fish Processors and Exporters Association - MPEA)၏ အဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့် အီးယူစျေးကွက်သို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နယ်သာလန်အစိုးရမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသော အစီအစဉ်။